मतदाताको साथ मलाई छ : हिरा भट्टराई – Peacepokhara.com
पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको आसन्न ३१ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको लागि उमेदवारी घोषणा गरेकी हिरा भट्टराई अहिले मतदातासँगको भेटघाटमा ब्यस्त हुनुहुन्छ । पोखराकै जेठो संस्था पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको ईतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्षको रुपमा उहा अघि सर्दै हुनुहुन्छ । भदौ ३१ र असोज १ गते हुने महाधिवेशन र उहाको उमेदवारीमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी यस्तो छ :
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ, घोषणा पत्र पनि सार्वजनिक भइसक्यो, मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
हो, पोखरेली उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वको लागि मैले उम्मेदवारी र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेकी छुु । अहिले मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेकी छु । उहाँहरुको प्रतिक्रियाले मलाई सही समयमा सही निर्णय गरे जस्तो महसुस भएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने निकै उत्साहित छु ।
हजुरले यसो भनिरँहदा उम्मेदवारी फिर्ताको चर्चा पनि निकै चलेको छ त ? अन्तिम समयमा कुनै सहमति भयो भने यहाँ पछाडि हट्ने संकेत हो ?
यो मेरो आधिकारिक धारणा होइन । कसले के हल्ला गर्दै हिडेका छन् भन्ने तिर म ध्यान दिन्नँ तर मतदाताहरुको साथ र सहयोगले मेरो उम्मेदवारीको विकल्प देखेकी छैन । मेरो उम्मेदवारी कुनै रहर र प्रचारका लागि होइन । संघमा १४ वर्ष देखिको मेरो संलग्नता, विभिन्न पद र जिम्मेवारीको सफलतापूर्वक बहनले संघको नेतृत्वका लागि आफूलाई योग्य सम्झेर मैदानमा उत्रिएकी छु । हारजीत मतदाताको मतले निर्धारण गर्नेछ, जुन मलाई स्वीकार्य हुनेछ ।
६२ वर्ष लामो संघको इतिहासमा पहिलो पटक महिला अध्यक्षको उम्मेदवारमा आउनु भएको छ । महिला भोटरहरुको साथ कस्तो छ ?
एउटा गरिमामय इतिहास बोकेको पोखराकै जेठो संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा ६२ वर्षपछि मैले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिँदै छु । महिला भोटरको राम्रो साथ छ । मेरो उम्मेदवारीले महिला भोटर साथीहरु निकै खुसी हुनुभएको छ, हजुर अगाडि बढ्नुस् हाम्रो साथ रहनेछ भनेर हौसला दिइरहनु भएको छ । र अर्को कुरा म के भन्न चाहान्छु भने लैंगिक हिसाबले म महिला हुँ तर मेरो उम्मेदवारी महिलाको मात्रै पनि होइन । २ हजार ७ सय ४९ जना मतदाता रहेको संघमा महिलाको संख्या ४ सय ६७ छ । उहाँहरुको मात्रै म उम्मेदवार भनेर बुझ्नु हुदैन, म सबै मतदाताहरुको साझा उम्मेदवार हुँ । तर एउटा सत्य कुरा के हो भने मेरो उम्मेदवारीले व्यवसायमा लाग्ने धेरै महिला दिदी बहिनीहरुलाई ऊर्जा मिलेको छ । व्यवसायी महिलाको योगदानलाई मूल्याकंन गर्न पनि मेरो उम्मेदवारी जरुरी छ । महिला र पुरुष भनेर विभाजित मानसिकताले हेर्ने समाजमा मेरो उम्मेद्वारीले पक्कै अर्थ राख्छ ।
निजीक्षेत्रमा महिलाको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
निजी क्षेत्रमा महिलाको उपस्थितिलाई वर्षौ देखि बेवास्ता गरियो । काउन्टरको रेखदेख गर्ने र पैसा गन्ने काममा मात्रै सिमित गरियो । व्यवसायिक पहिचान बनाउने वातावरण तिर ध्यान दिइएन । तर आजका महिला निजी क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिकासाथ व्यवसायिक पहिचान बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् । उद्यमशीलतामा पनि महिलाको सक्रिय सहभागिता हुदै आएको छ । यसले महिला सशक्तिकरण र आर्थिक अधिकारलाई सबल बनाउँदै गएको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रमा महिलाको उपस्थितिले व्यवसायिक विकासमा पक्कै पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
अध्यक्षका ६ आकांक्षी छन् तीमध्ये हजुरलाई नै भोट किन दिने व्यवासायीले ?
महिला भएकै कारणले भोट मलाइदिनुस् भनेर मैले भनेकी छैन । ६ दशक लामो संघको इतिहासमा सबै पुरुष दाजु भाइले नेतृत्व लिनुभयो । उहाँहरु प्रति हजुरहरुको विश्वास रह्यो तर त्यहीं ठाउँमा बसेर काम गरिरहने महिला दिदी बहिनीको मूल्यांकन गर्ने सही समय अहिले आएको छ । संघमा १४ वर्षसम्म म महिला हुँ भनेर कहिल्यै पछाडि हटिनँ, प्राप्त जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहें भने अहिले महिला भन्दै गरिने टीका टिप्पणीलाई असत्य सावित गर्नुछ तसर्थ यसरी काम गरिरहँदा अब नेतृत्व लिने पालो महिलाको पनि आएको छ ।
व्यवसाय र व्यवसायीका समग्र हितका लागि कार्य योजना के छन् ?
सुन्दर नगरी पोखराको समग्र विकासका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकाको बारेमा मैले घोषणा पत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेकी छु । पोखराको अर्थतन्त्रको मजबुत आधार भनेको पर्यटन व्यवसाय हो यसको प्रवद्र्धनका लागि संघले पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने छ । महिला उद्यम विकासलाई बहुआयामिक तरिकाले सोचेर वृहत्तर विकासका नीति तथा कार्यक्रमलाई जोड दिएकी छु । वस्तुगत संघलाई क्रियाशील बनाइने छ । विभिन्न बहानामा हुने बन्द हड्ताललाई निरुत्साहित गर्न बन्द मुक्तको अवधारणालाई लागु गर्न सहकार्य र समन्वयमा जुट्ने छ ।
कुनै पनि बेला रिस्क लिन सक्छु : सुविन भट्टराई
peacepokhara 16 Mar 2017
peacepokhara 07 Jul 2015